ရတနာ နေ့အထူး စာကျက်ဝိုင်းနှင့်ဘော? ...
Created: 02 July 2015	ဒီကဏ္ဍမှာ သင့်ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် သင်သိတဲ့ လုပ်ငန်း၊ ဆိုင်၊ ကုမ္ပဏီ ဝဗ်ဆိုက်ကို မတွေ့ဘူး ဆိုရင် အပေါ်မှာ "Add / အသစ်ထပ်ထည့်ရန်" ဆိုတဲ့ လင့်ခ် ကို နှိပ်ပြီး ထပ်ထည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆို လူများများက သင့်ဝဗ်ဆိုက်ကို တွေ့သွားမှာပါ။FG_AUTHORS: webmaster	More	တပ်အမတ်တွေ တဆင့်ချင်းလျှော့ဖို့ ဒေါ်စုလိုလား
Created: 02 July 2015	FG_AUTHORS: ဘီဘီစီ သတင်းများ...	More	ကန်နှင့် ကျူးဘား သံတမန် ဆက်ဆံရေး ပုံမှန်ထားဖို့ သဘောတူ
Created: 02 July 2015	အမေရိကန်နဲ့ ကျူးဘားကြား သံတမန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ထားရှိဖို့နဲ့ ဒီလနှောင်းပိုင်း ၀ါရှင်တန်နဲ့ ဟာဗားနားမြို့တော်တို့မှာ သံရုံးတွေပြန်လည် ဖွင့်လှစ်ဖို့ အစီအစဉ်ကို နှစ်နိုင်ငံတို့ သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဘရက် အိုဘားမားက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပြောပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်နိုင်ငံအကြား နှစ်ပေါင်းများစွာ ရန်လိုမုန်းထားမှုကို အဆုံးသတ်တဲ့ လတ်တလော ကျ တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မ...	More	ရွေးကောက်ပွဲ ကျင့်ဝတ် နိုင်ငံရေး ၆၇ ပါတီ သဘောတူညီမှု အမေရိကန်ကြိုဆို
Created: 02 July 2015	နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ လိုက်နာရမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်တွေကို နိုင်ငံရေးပါတီ (၆၇)ခု သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုး လိုက်တဲ့အပေါ် မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမေရိကန်သံရုံးက ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ ဒီကျင့်ဝတ်တွေ ပြဌာန်းနိုင်ဖို့ ပါတီတွေအချင်းချင်းကြားမှာ အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး မိမိတို့အနေနဲ့ အလေးထားလိုက်နာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း လူ့...	More	လှေစီးပြေးပြဿ နာ အဖြေရှာဖို့ ကုလအကြီးအကဲတွေ ASEAN ကို တိုက်တွန်း
Created: 02 July 2015	အရှေ့တောင်အာရှက နိုင်ငံပြောင်းရွှေ့ဒုက္ခသည်များအရေးကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့ လူထုအခြေပြု ချဉ်းကပ်မှုနဲ့ အဖြေရှာကြဖို့ ကုလသမဂ္ဂ အရာရှိကြီးတွေက တောင်းဆို လိုက်ပါတယ်။ ဒီအပတ်နှောင်းပိုင်း အာဆီယံ ဝန်ကြီးအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲ မတိုင်ခင် ကုလသမဂ္ဂ အေဂျင်စီ အကြီးအကဲတွေက အခုလိုတောင်းဆိုလိုက်တာပါ။ ဒုက္ခသည်များ မဟာမင်းကြီး၊ လူ့အခွင့်အရေး မဟာမင်းကြီး၊ နိုင်ငံကူးပြောင်းမှု...	More	နှစ်၂၀ ကျော် ကျွန်ပြုခံရသူ ရေလုပ်သား ကိုမြင့်နိုင် မိသားစုနှင့်ပြန်ဆုံ
Created: 02 July 2015	ငါးဖမ်းလှေတွေ ပေါ်မှာ ကျွန်တွေလို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ပြီး အတင်းအဓမ္မ ခိုင်းစေခံခဲ့ ရတဲ့ မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမား ၈၀၀ လောက် အင်ဒိုနီးရှား ကနေ မြန်မာပြည် ကို ပြန်ပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲက အနှစ် ၂၀ ကျော် ငါးဖမ်းကျွန် ဘဝ နဲ့ လှုပ်ရှား ရှောင်တိမ်းခဲ့ရတဲ့ ကိုမြင့်နိုင်အကြောင်း အေပီ သတင်းဆောင်းပါးကို အခြေခံပြီး ကိုငြိမ်းချမ်းက ပြောပြပါမယ်။
အင်ဒိုနီ...	More	အင်္ဂလန်အသင်း ကိုယ့် ဂိုးကိုယ်သွင်းလို့ ဂျပန်အသင်း ဗိုလ်လုပွဲတက်
Created: 02 July 2015	ကနေဒါနိုင်ငံ Edmonton မြို့မှာ ဒီကနေ့ ကန်ခဲ့တဲ့ (၇)ကြိမ်မြောက် အမျိုးသမီး ကမ္ဘာ့ဘောလုံး အကြိုဗိုလ်လုပွဲမှာ လက်ရှိချန်ပီယံ ဂျပန်အသင်းက အင်္ဂလန်အသင်း ကို ၂ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရပြီး ဗိုလ်လုပွဲတက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
ကစားပွဲစပြီး (၃၂) မိနစ် မှာ ဂျပန် အသင်း ကပ္ပတိန် Aya Miyama ကpenalty (၁)ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးနောက် (၄၀)မိနစ်မှာ အင်္ဂလန်အသင်းက အလယ်တန်းလူ Fara...	More	ရုရှ မှာ မြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း ဖွင့်
Created: 02 July 2015	FG_AUTHORS: ဘီဘီစီ သတင်းများ...	More	မန္တလေး ကျောင်းသားလေးဦး ဖမ်းဆီးခံရ
Created: 02 July 2015	မန္တလေးရတနာပုံတက္ကသိုလ် ကျောင်းဝင်းအတွင်း အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး ဆေးမှုတ်တယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်တချို့ကို ဒီကနေ့ ညနေမှာ အာဏာပိုင်တွေက ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ ဒီအတောတွင်း ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာ မနေ့က ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ ကျောင်းသားတွေထဲက ခေါင်းဆောင် တချို့ကိုလည်း ပုဒ်မ (၁၈)နဲ့ တရားစွဲ အမှုဖွင့်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆက်သွယ်စုံစမ်းထားတဲ့ ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင...	More	အနိမ့်ဆုံး နေ့စားလုပ်ခ သတ်မှတ်ရေး ကန့်ကွက်မှုတွေရှိလာနိုင်
Created: 01 July 2015	ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီကနေ ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ နေ့စွဲနဲ့ အဆိုပြုတဲ့ အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ချက်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ အလုပ်သမားတွေဘက်ကရော အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကပါ ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနိုင်ကြောင်း သတင်းတွေ ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီအဆိုပြုချက်အပေါ်မှာလည်း အလုပ်သမားအရေး ဆောင်ရွက်သူတွေဘက်ကလည်း အမြင်အမျိုးမ...	More	လှေစီးပြေးအရေး အရင်းခံအကြောင်းရှာဖို့ AI တိုက်တွန်း
Created: 01 July 2015	လှေစီးပြေးဒုက္ခသည်တွေအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ရော ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ပါ ပိုပြီး ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ကြီး AI ကပြောလိုက်ပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအတွင်း လှေစီးပြေး ဒုက္ခသည်တွေ အရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ အာဆီယံနိုင်ငံတွေဘက်က လုံလောက်တဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေ အခုချိန်ထိ မလုပ်သေးတဲ့အတွက် လာမယ့်...	More	မြန်မာ့ စီးပွားရေး ကျနိုင်လို့ IMF သုံးသပ်
Created: 01 July 2015	FG_AUTHORS: ဘီဘီစီ သတင်းများ...	More	လူကုန်ကူးဂိုဏ်းဝင်နှစ်ဦး ထိုင်းရဲ ဖမ်းဆီး
Created: 01 July 2015	ငါးဖမ်းသင်္ဘောသားတွေ ရှာဖွေစုဆောင်းပေးနေတဲ့ လူမှောင်ခိုကူးဂိုဏ်းဝင် အဓိကလူတွေလို့ဆိုတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကို ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့က ဒီကနေ့ပဲ ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။
အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ် Samruay Chatkrod နဲ့ အသက် ၅ဝ အရွယ် Chayuthphong Charoenporn တို့ဟာ ရထားဘူတာရုံတွေ၊ ဘတ်စ်ကားဂိတ်တွေ ဒါမှမဟုတ် အများပြည်သူ သွားလာရာ နေရာတွေမှာ အလုပ်သမားအဖြစ် ခိုင်းလို့ရမယ့်လူတွေကို ရှာ...	More	အင်ဒိုစစ်တပ်လေယာဉ် ပျက်ကျမှု သေဆုံးသူ ၁၄၁ ဦးရှိပြီ
Created: 01 July 2015	အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်က သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ် ပျက်ကျရာမှာ သေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ ၁၄၁ ယောက်အထိ ရှိသွားပြီလို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
အရေးပေါ် ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့ ဆူမာတြားကျွန်းပေါ်က လူနေရပ်ကွက်ထဲ ပျက်ကျခဲ့တဲ့ လေယာဉ်အပျက်အစီးတွေကြားမှာ ဆက်လက် ရှာဖွေနေကြဆဲပါ။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံက တတိယအကြီးဆုံးမြို့ Medan မှာရှိတဲ့ လေတပ်အခြေစိုက်စခန်းကနေ ထွက်ခွာလာပ...	More	ဘောလုံးနဲ့ ဂေါက်သီးပေါင်း အားကစားနည်းသစ်
Created: 01 July 2015	FG_AUTHORS: ဗွီအိုအေ သတင်းစဉ်...	More	ဂရိအကျပ်အတည်းပေါ် စိုးရိမ်စိတ်ပြေလျော့ဖို့ သမ္မတအိုဘားမား ကြိုးစား
Created: 01 July 2015	FG_AUTHORS: ဗွီအိုအေ သတင်းစဉ်...	More	NLD ကော်မရှင်ကို တွေ့ခွင့်တောင်း
Created: 01 July 2015	မြန်မာနယ်စပ် ဖြတ်ကျော်ပြီး နာဂသူပုန်တွေကို အိန္ဒိယစစ်တပ်က တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာမှာ သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရမှုတွေ ကြီးမားခဲ့တယ်လို့ ကြေညာခဲ့အပြီး ရက်ပေါင်းအတော်အကြာမှာပဲ အခုလို နာဂသူပုန်တွေကို အပူတပြင်း ပစ်မှတ်ထား တိုက်ခိုက်မှုမှာ အမှန်တကယ် သေဆုံးမှုတွေ မရှိခဲ့ဘူးလို့ အိန္ဒိယ ထောက်လှမ်းရေး အရာရှိတဦးက ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်း ဗွီအိုအေသတင်းထောက် Shaikh Azizur Rahman နယ...	More	Sidebar